Koorsada AutoCAD, oo leh macallin online ah - Geofumadas
Nofeembar, 2011 AutoCAD-AutoDesk, Baridda CAD / GIS
Tani waxaa laga yaabaa inay tahay mid ka mid ah koorsooyinka ugu fiican ee AutoCAD ee aan arkay, oo ay ku hoos jiraan qaabka fasalka caadiga ah. Laga soo bilaabo qorayaasha isku midka ah ee VectorAula, oo sidoo kale baraan Koorsooyinka Sawirrada iyo Web Design Design.
Inkasta oo ay jiraan habab badan iyo habab badan, oo ka mid ah qiimaha ugu qiimaha badani waa habka waxbarashada iyo qiimeynta horumarka; taasi way ka duwan tahay koorsada si ikhtiyaari ah, aragto-ku celcelin iyo sidoo kale in la bilaabi karo wakhti kasta, iyada oo aan la sugin wicitaan.
Koorsada buuxda waxay socotaa saacadaha 90, oo la dabooli karo oo soo noqnoqonaya si ay u dhadhamiyaan muddada 12. Toddobaad kasta waxay ka kooban tahay cutub oo mawduucyada 71 sida soo socota:
1 - Qalabaynta iyo qaabeynta
1 Shuruudaha iyo rakibidda
2 Deegaanka shaqada
3 Qaab dhismeedka aasaasiga ah, shaashadda iyo menus
2 - Xiriirka koowaad
4 Horudhac: CAD, Ujeedooyin, aqoon hore
5 Hawlaha aasaasiga ah ee shaqada
6 Shirkadaha sawirka aasaasiga ah, qumman iyo wareega
7 Daabacaadda aasaasiga ah: erasure, isbarbardhig, sawir dhexe, dherer iyo dalag
8 Daabacaadda qoraalada
9 Kaydinta sawirada
3 - Xaqiijinta sawirka
10 Tixraacyada sheyga
11 Hababka gelitaanka xogta: adigoo isticmaalaya jiirka, keyboard, iyo isku dhafan
12 Nidaamka Iskuduwida
13 Hababka xulashada sheyga
15 Xudduudaha geeska ah
16 Xawaaraha shaqada
17 Muujinta qorshaynta: ballaarinta iyo qaabaynta meelaha iyo faahfaahinta
4 - Qalabyada iyo qaabeynta dhiska
18 Foomamka isku dhafan: curves, geesoole, ellipses, curoodhada iyo curyaamiimka
19 Isbedelka joomatari
20 Xakameynta jagada iyo wareegga xubnuhu
21 Xakamaynta cabbirka, dhererka, iyo qiyaasta
22 Duubista walxaha ku celiska ah: shakhsi, qaabdhismeed, roon, shaxan, sawir iyo isku mid ah
23 Isbedelka tooska ah ee xaglaha
24 Tijaabinta calaamadaha: dhibcaha, jajabyada iyo qalinjebinta
5 - Maareynta mashruuca
25 Xakameynta sifooyinka walxaha. Midabka, calaamadaha iyo meelaynta wakiilka. Qodobbada khadadka. Noocyada khadka Xajmiga khadadka
26 Mashruucyada mashaariicda lakabyo. Maamulaha hantida lakabka. Xakamaynta muuqaalka iyo daabacaadda hay'adaha.
27 Abaabulida iyo qaabeynta qaababka kala duwan ee mashaariicda kala duwan. Xaashida qaab-dhismeedka
28 Nadiifinta qeexitaannada.
6 - Fikradaha iyo calaamadaha
29 Qoraalo, qoraal iyo qoraalo. Qor qaababka qoraalka
30 Qaybaha iyo xagashada. Nidaamka shoogga
31 Geedi socodka abuurista walxaha la soo koobay. Tilmaamaha si aad u gelisid block. Talooyinka iyo taxaddarrada isticmaalka baqarada
32 Macluumaadka u dhexeeya sawirada. Jooji oo ka dhig hal sawir furan oo kale
33 Xogta la xidhiidha arrimo. Qeex, geli oo ku dheji dariiqooyin sifooyin ah
7 - daabacaadda mashruuca 2D
34 Daabacaadda iyo qorshaynta diyaaradaha
35 Abaabul bandhigyada
36 Qaabeynta bogga Layout of views dhowr. Sanduuqa saxda ah. Xisaabinta miisaanka. Hababka daabacaadda
37 Soo bandhig bandhigyada
38 Soo daabac bandhig
39 Ku beddel PDF
40 Mashaariicda qaabka DWF
41 Meeleynta qiyaasta, istiraatiijiga, xaglaha, riyooyinka, xajmiga iyo xajmiga
42 Maareynta qaababka cabbiraadda
43 Beddelidda cabbiraadda
44 Beddelidda cabbirada, goobta qorshaha
45 Xisaabinta meelaha
9 - Hordhaca 3D
46 Ismaaciil Sawirada 2D
47 Shaqada 3D
48 Muuqaal saddex-cabbir ah
49 Noocyada muuqaalka ee 3d
50 Ka eeg Cube
51 Qoritaanka diinta
52 Muuqaalka muuqaalka iyo muuqaalka furan
53 Beddelka sheyga 2D ee 3D. Sareeynta darbiyada
54 Isbedelayaasha 2D ee 3D
55 Nidaamyada isdhexgalka shakhsiga
10 - walxaha 3D
56 Solids vs. Meshes
57 Cadaadiska asaasiga ah: Prism-ka, jajabka, cirifka, dhululubada, mawduuca, muuska
58 Cadaadiska la saadaaliyay: jeexan, sariirta, wareegga
59 Xakamaynta isku dhafka. Hawlaha Boolean
61 Meshes aasaasiga ah
62 Meshes isku dhafan iyo mesh polyche
63 Isbedelka sheyga
11 - Hantida 3D
64 Bedelida 3D
65 Qalabka Editing and Surf Editing
66 Maqaar iyo qaybo
12 - Soo jeedinta mashruuca 3D
67 Sawir sawir oo muuqaal ah: Render
68 Iftiiminta: hooskii, iftiinka qoraxda, iftiinka macmalka.
69 Qalabka: Tifaftirka, dhajinta, dhameeyay.
71 Daabacaadda hore 3D Soo bandhigida sawirkii ugu dambeeyay ee mashruuca ee 3d. Naqshadda xaashida. Bixinta qaabab dijital ah.
lacagta koorsada tagaa by 190 Euros, ma u xun, waxaa ka fiirsaneysa in ay tahay koorso ma aha oo kaliya 2D 3D laakiin sidoo kale xaqiijiyey in ay kuu soo dirto boostada dhamaystaan.
Ma ku jiraan barnaamijka, laakiin waxaad isticmaali kartaa a qaybta waxbarashada of AutoCAD oo si buuxda u shaqeynaya si ay u bartaan. Tani waa liis ay ku qoran yihiin qaar ka mid ah qalabka dhijitaalka ah:
Buugga Koorsada ee Cutubyada Waxbarashada 12 (bogagga 410)
12 waxqabadyo ku hogaamiyay talaabo talaabo tallaabo ah (95 boggeeda)
35 dhaqdhaqaaqyo xalin xor ah
Uruurinta 2D blocks
Uruurinta walxaha 3D
Buug-gacmeedka casriga ah ee AutoCAD 2011 iyo 2010 ee (bogagga 65)
AutoCAD 2011 iyo buugga isticmaalaha 2010 ee (bogagga 1024)
Xaashiyo tixraac ah oo degdeg ah (bogagga 6)
Lifaaqyada: maqaallo, tabobar iyo tusaalayaal (bogagga 60)
Post Previous«Previous Latinobarómetro, soo sheeg 2011
Post Next Safarkii ugu dambeeyay ee sawirada 7Next »
2 Jawaab ah "Kooras AutoCAD, oo leh macallin online ah"
Tusaale ahaan isagu wuxuu leeyahay:
Waad ku mahadsantahay inaad na soo jeediso.
Waxaan isku dayeynaa inaan qabanno koorsada sidii aan jeclaan lahayn inaan wax u barinno. Waxaan si joogto ah u horumarinaynaa iyada oo looga mahadcelinayo dib ula soo noqoshada ardayda.
Dhawr bilood gudahood waxaan dib u cusboonaysiin doonaa v.2014 leh fiidiyowyo dheeraad ah iyo layliyo sawirro dhab ah.
Jaime isagu wuxuu leeyahay:
barnaamij waxbarasho oo xiiso leh iyo sidoo kale-koorso ... na siin doonaa .sera ka mid ah waxaa laga yaabaa in didactics bilaash ah ama ugu yaraan qayb ka mid noo ee Latin America si aynaan ka heli kartaa this dabcan lacag meterial in la raaco? ... mahad filan jawaab Jaime ......